WARBIXIN: Yay Barcelona ku marti qaaday sanadkan koobkeeda Gamper Cup, Maxaysa tahay sirta ka dambeysa ee koobkan loo qabto? – Gool FM
(Catalonia) 29 Juunyo 2016. Gamper Trophy Cup, oo loogu yeero marka la joogo luqada Catalan Trofeu Joan Gamper ayaa ah koob dabaal deg kulamada la isugu diyaarinayo xilli ciyaareedka cusub kaa ay qabato Barcelona wuxuuna sidoo kale fursad wayn u tahay tababaraha si uu u arko muuqaalka iyo bandhiga kooxda.
Waa cadadkii 51-aad ee koobkan sidoo kale loo yaqaano “La Festa del Gamper.” Waxaana sanadkan ugu ballansan kooxda Sampdoria oo ay ku wada ciyaari doonaan Camp Nou 10-ka bisha August.
Haddaba muxuu yahay koobkan Joan Gamper maxaysa tahay sababta loo qabto?.
Koobkan ayaa loogu magac daray si loogu sharfo Joan Gamper, (Hans Kamper), waa ninka soo helay ama aas-aasaha kooxda FC Barcelona waana mid ka mid ah xiddigihii ugu horreeyay ee Barcelona. Ninka lagu magacaabo Gamper ayaa asal ahaan ah nin Swiss ah inkastuu markii dambe qaatay dhalasho Spanish ah, wuxuu ahaa kabtanka kooxda FC Basel ee Switzerland wuxuuna ahaa aas-aasaha kooxaha kubbada cagta ee FC Basel and FC Zürich.
Sidoo kale wuxuu ahaa Gamper madaxwaynihii ugu horreeyay ee kooxda Barcelona waxaana loogu adeegayay sida madaxwaynaha kooxda muddo dhowr ah kaddib dhimashadiisii.
Kooxda kubbada cagta Barcelona ayaa waxaa aas-aasay Gamper 22-kii October 1899 wuxuuna ogeysiis saaray jariiradda ciyaaraha ee “Los Deportes” isagoo baadi goobaya ciyaartoy kubbad cagta ah. Waxay tani ku hogaamisay kulan ka dhacay meesha jirdhiska GYM “Gimnasio Solé” bishii 29-ka November 1899 intaa kaddibna kooxda kubbada cagta ee Barcelona waxay ahayd mid dhab ah. Dadkii aas-aasay waxay ahaayeen Swiss, British iyo Spanish oo aad uga hela kubbada cagta.
Joan Gamper Trophy ayaa waxaa sanadkii 1966-dii aas aasay madaxwaynihii Barcelona ee waqtigaa Enric Llaudet si loogu sharfo Gamper. Laga soo bilaabo 1966 Gamber Cup wuxuu ahaa tartan yar oo ay ciyaaraan afar kooxood, laakiin wixii markaa ka dambeeyay waxaa laga dhigay hal kulan oo qura waana Barcelona iyo kooxda ay ku marti galiso.
Joan Gamper Cup ayaa sidoo kale ah koobka kaliya ee sanadka kolkaa oo dhammaan kuraasta Camp Nou ee 98,772-kursi laga iibinayo dadyowga guud ahaan waliba qiimo aad u jaban.
Hazard oo dhaawac ku seegi kara kulanka Belgium V Wales